Lubnaan oo si xoog ah u gubatay iyo video lasoo dhigey baraha bulshada – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Lubnaan oo si xoog ah u gubatay iyo video lasoo dhigey ...
Lubnaan oo si xoog ah u gubatay iyo video lasoo dhigey baraha bulshada
Warbaahinta bulshada ayaa awood u yeeshay iney soo tabiyaan dab baaladhan oo ka kacey lebnan dabkaas oo socdey illaa fiidnimadii Axadda ilaa maanta, ka dib markii ay faafisay fiidiyoowyo iyo sawirro sharraxaya waxa ka socda Lubnaan, kaasoo gubanaya dab, kaas oo sababay khasaare nafeed.
Lubnaan waxay ka bilaabmaysaa waqooyiga ilaa koonfurta maalmahan kor u kac kuleylka, kaas oo bilaabmay Axada oo ilaa maantadan la joogo, sababa la xiriira kororka heerkulka illaa heer xilliyeedka, wuxuuna gaaray duhurkii Isniinta ilaa 40 darajo, sida laga soo xigtay goobta cimilada lebanon iyada oo loo marayo akoonkiisa mareegta ” Facebook. ”
Kuleylka aadka u sareeya ayaa sababay dab ka kacay qaybo kala duwan oo dalka ah, dabeysha ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaartey fidinta dabka iyo burburka dhul ballaaran oo dhulka ah. Under hashtag #LebanonFire, fiidiyowyo muujinaya baaxada ololka ku faafa warbaahinta bulshada laso dhigey
Tafaasiil ahaan, dab ayaa xalay ka kacay aagga Al-Mushrif, kaas oo ku dhuftay aag kumanaan mitir ah oo ku xiran dhowr dhismeyaal degsiimooyin iyo Jaamacadda Rafic Hariri.
Agaasimaha howlgalada difaaca bulshada rayidka ee Lubnaan, Elie Khairallah, ayaa sheegay in dabka uu ka bilowdey aag yar laakiin markii dambe uu ku fiday tuulooyinka deriska la ah iyo Jaamacadda Rafic Hariri, oo u baahday cutubyo ka kooban 15 xarumood oo difaaca bulshada inay aadaan goobta dabku ka kacay.
Difaaca shacabka: Dabka si dhaqso ah ma u damin doonto
Taa baddalkeed, Difaaca Madaniga ahi wuxuu ku dhawaaqay inay qabteen saddexdii maalmood ee la soo dhaafay in ka badan 104 ergooyin, oo u dhexeeya daminta dabka, ambalaasta iyo badbaadinta.
Agaasimaha Guud ee Difaaca Madaniga ah ee Lubnaan Raymond Khattar ayaa u sheegay “Al Arabiya.net” dhicitaanka 5 ka mid ah xubnahooda intii ay isku dayayeen inay damiyaan dabka ilaa iyo Isniinta iyo maanta.
Wuxuu kaloo xaqiijiyay in farsamooyinka difaaca shacabka, ay xoojiyeen xubno, ay taageerayaan cutubyo ciidan, ayna taageerayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca, ay u ordeen inay xakameeyaan dabka.
Waxaan awoodnay inaan bakhtiinno ku dhawaad ​​70% dabka, laakiin sababaha cimilada ee heerkulka sare iyo xawaaraha dabeysha ayaa dabka shiday,
Brigadier Khattar ayaa sidoo kale tilmaamay in qaybaha difaaca madaniga ah ay ka shaqeeyeen daadgureynta guryo badan oo ku yaal aagga Mushrif si aysan dabka u gaarin, isagoo tilmaamay inaysan suurta gal ahayn in taariikh loo sameeyo deminta dabka sababta oo ah sababaha cimilada ma caawin karaan tan.
Miinooyinka jira iyo “gudaha” abaabula
Wasiirka arrimaha gudaha Raya al-Hassan, oo booqday aagga dabka, ayaa xaqiijiyay in hawl-gal ciidan uu soo fara-gelinayo daminta dabka aaggaas oo aanu jirin xiisad kacsan, wuxuuna sharraxay in aagga ay ka buuxaan miinooyin sidaas darteedna ay aad uga taxaddari jireen intii dabkaasi socday.
Wasiirka gaashaandhigga Elias Bou Saab, wuxuu sheegay in labo diyaaradood oo Qubrus ay imaan doonaan Lubnaan si ay gacan uga geystaan ​​howsha lagu baabi’inayo dabka ka socda magaalada Mushrif taas oo uu hogaaminayo Raiisul wasaare Saad Hariri.
Dabka ayaa ku fiday Brih, Fuwara iyo Kfarhim, iyo dab kale oo xalay ka kacay magaalooyinka Akkara kuleylka iyo dabaylaha awgeed.
Sidoo kale magaalada Qobayat, dabku wuxuu gubtay dhul dhul daaqsimeed ah, iyo howsha xubnaha difaaca bulshada ee xarunta Qobayat si loo bakhtiiyo. Dab kale ayaa ka kacay dhul ku yaal magaalada Al-Sindiyan Al-Akkari, kaas oo ku dhuftay dhul isla markaana ku fiday dhul ka mid ah geedaha geedku ku yaal. Gudaha magaalada Cayn Tinta, ayaa dab ku gubay caws qalalan iyo geedo saytuun ah.
Koonfurta, dab weyn ayaa ka kacay subaxnimadii talaadada dhulalka ku yaal magaalada Saffariya ee aagga Jezzine. Ghajar illaa Caydiid, oo ka kooban UNIFIL, ciidanka Lubnaan iyo Difaaca Madaniga ayaa ka shaqeeyey in la bakhtiiyo. Magaalada Arai, degmada Jezzine, waxaa ka kacay dab, kaas oo dilay ku dhawaad ​​7 dun oo geed oak ah iyo geedo kale.
Previous articleMadaxwaynaha shiinaha Xi JinPing “si adag uga hadley mudaxarada
Next articleLebanon burns and ignites the communication sites .. Videos bloody heart
Somaliland oo war cusub ka soo saartay kulankii Muuse Biixi iyo...
Wafdigii loo xilsaaray baaritaanka dadkii dhawaan lagu dilay Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb...